RayDia na Diaraika: Mahatsiaro ho nofitahin’i Narson Rafidimanana ny ankamaroan’ny mpikambana
dimanche, 21 octobre 2018 16:11
Toy ny vara-datsaka no nandraisan’ny ankamaroan’ny mpikambana ao amin’ny fikambanana RayDia na Diaraika ny fanambarana nataon’i Narson Rafidimanana teto Antananarivo fa hanohana ny kandida Andry Rajoelina izy ireo amin’ny fifidianana filoham-pirenena hatao ny 7 novambra 2018.
Raha nanao fivoriambe ny RayDia tamin’ny septambra 2018, hoy ny mpikambana, dia tapaka fa tsy manohana ary tsy manao politika ny fikambanana fa hanao asa soa fotsiny. Gaga izahay fa ny mifanohitra amin’izany no mitranga ankehitriny.
Betsaka ny mpikambana tezitra satria mahatsiaro ho natao fitaovana sy nofitahina. Tsy vitsy no nametra-pialana tsy ho mpikambana RayDia intsony noho io fanambarana nataon’i Narson Rafidimanana io.
Saika HVM mpiara-dia taminy fony izy minisitra ny ankamaroan’ny mpikambana RayDia na Diaraika.
Ny mpanara-maso fiainana politika indray tsy gaga amin’io fanapahan-kevitr’i Narson Rafidimanana hanohana an’i Andry Rajoelina io. Mpinamana izy sy Mamy Ravatomanga, samy mpandraharaha. Mamy Ravatomanga olona akaiky ary manampy betsaka an’i Andry Rajoelina.
Efa ho avy rahateo ny lodsia izao dia efa hifanjoy indray i Narson Rafidimanana sy Mamy Ravatomanga satria hanao “primeur” amin’io lodsia io, hanondrana amin’ny fiaramanidina.